Ogaden News Agency (ONA) – Daggaaladii u danbeeyay ee ka dhaca Gudaha Ogadeniya
Daggaaladii u danbeeyay ee ka dhaca Gudaha Ogadeniya
Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa soo saartay laba daggaal oo Ciidamada woyanaha lagu waxyeeleeyay Daggaaladan oo dhacay 29/06/2015 iyo 20 june 2015 waxay ka dhaceen deegamada Dhuxun iyo aaga Degmada Dhagaxbuur.
Kitaabalay oo Dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka dulaysan ee wayaanaha lagaga dilay 4 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay. Daggaalkani waxa uu dhacay 29 June 2015.
Daggaal kale oo isna Xarunta dhexe JWXO soo tabisay waxa ciidamada Woyaanaha lagu haleelay Shabaaxa oo ka tirsan degmada Dhuxun ee Gobolka Nogob Waxaana ciidanka Woyanaha halkaas kaga bakhtiyay 4 askari halka 6 kalena lagaga dhaawacay.
Daggaalada Ciidamada JWXO iy kuwo gumeysiga EThiopia ayaa sii kordhay bisha Barakaysan ee Ramadaan. Daggaaladaas oo Ciidamada Woyanaha aad loogu jabiyay.